GM oo shaacisay qabashada doorashada 038, 069 iyo 095 | KEYDMEDIA ENGLISH
GM oo shaacisay qabashada doorashada 038, 069 iyo 095
Guddiga doorashooyinka Galmudug, ayaa ku dhawaaqay, jadwalka, xilliga la qabanayo doorashada, saddex kursi oo si weyn indhaha loogu wada haayo.
Gaalkacyo, Soomaaliya – Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka her Dowlad gobolleed Galmudug, SEIT, ayaa shaaciyay xilliga la qabanayo doorashada saddex kursi, oo degaan doorashadoodu tahay, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Saddexdaan kursi oo doorashadooda, si weyn indhaha loogu hayo, ayaa kala ah; HOP038, HOP069 iyo HOP095, kuwaas oo baarlamaankii 10-aad ay kala matalayeen, Axmed Macallin Fiqi, Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa iyo Cabdikariin Khaliif Dhalac.
Maanta iyo berri, ayaa la shaacin doonaa, Guddiga Xulista, diiwaan galinta Ergada, qabashada araajida musharixiinta iyo shahaado siintooda, dorashada kuraastaan, ayaa dhacaeysa, 12 Maarso 2022, oo sabtiga soo socda ku beegan.
HOP069, waxaa ku loollami doona, Odawaa iyo Al-Cadaala, halka aysan ilaa hadda caddeyn in HOP038, uu mar kale, isku soo taagi doono Axmed Fiqi, halka bulshada Gaalkacyo, si weyn uga soo hor jeedaan soo laabashada Dhalac ee HOP095.
Kursiga HOP095, waxaa saameyn xooggan ku leh, Villa Somalia, oo Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac, wuxuu ku daaban yahay Fahad Yaasiin, waxayna bulshada Gaalkacyo doonayaan, in Dhalac la marsiiyo jidkii Ubax Tahliil.
Inkastoo, dhowr musharrax u taagan yihiin baratankan kursigaan, haddana, sida uu muujinayao guuxa shacabka, beelaha leh kursigan, waxa ay la doonayaan Musharrax Maxamed Siciid Yare, oo ka yimid bahda waxbarashada.
Kaliya lix kursi ayaa ka dhiman soo af-meeridda, doorashada kuraasta Golaha Shacabka ee taalla Galmudug, xilli ay kaliya lix maalmood, ka dhiman tahay, waqtiga la qorsheeyay in lasoo gabagabeeyo guud ahaan doorashooyinka baarlamaanka.
213 kursi oo Golaha shacabka ah, ayaa ilaa hadda la doortay, waxaana wali baaqi ah, 62 kursi, doorashooyinkii caasimadda ka socday, ee kuraasta Waqooyi iyo Banaadiriga ayaa hore loo soo gabagabeeyay, halka, mushkiladda ugu weyn ka taagan tahay Garbahaarrey.